Warranty Period Query | HUAWEI Global
အာမခံ အချိန်ကာလဆိုင်ရာ မေးမြန်းရန်
၁။ IMEI/MEID နံပါတ်ကို ရယူရန် *#06# ကိုနှိပ်၍ ခေါ်ဆိုပါ။
၂။ IMEI/MEID/MAC/SN ကို လက်ဆောင်ဗူး သို့မဟုတ် ဖုန်း၏ အမှတ်အသား မှလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ စနစ်မှ တူညီတိုက်ဆိုင်သော အချက်အလက်ကို မရှာပေးနိုင်ပါ။
၁။ သင်ထည့်သွင်းသော နံပါတ် မှားယွင်းကောင်း မှားယွင်းလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံ ကြိုးစားပါ။
၂။ အကယ်၍ သင့်နံပါတ်ကို ရှာဖွေမတွေ့သော်ငြား သင်၏ ဝယ်ယူထားသော သက်သေအထောက်အထား ကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အာမခံ အချက်အလက်ကို ထပ်မံတိုးမြင့်နိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်ပို့ မှတ်ချက်ပေးမည်။ .
သင်၏ စက်ပစ္စည်းသည် ယင်းတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ : ထပ်၍ <>
သင်၏ ခံစားခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်
လက်ရှိ အခြေအနေ။: အသက်ဝင်သည
ကာကွယ်ပေးထားသော စက်ပစ္စည်း၏ ထုတ်လုပ်မှု အာမခံသက်တမ်းကို တိုးမြင့်မည်။ (ဟန်းဆက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး အပိုပစ္စည်း၊ အားသွင်းကြိုး၊ အပြင် ဘက်ထရီ အစရှိသဖြင့်တို့ မပါဝင်ပါ။)
အသုံးပြုမှု အကြိမ်အရေအတွက်။: ၁ ကြိမ်
Huawei ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင် အပလီကေးရှင်း၊ သန့်ရှင်းရေ၊ အစရှိသဖြင့်
ကိုင်တွယ်ထားမှုမှ ဖန်သားပြင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ပါဝင်ပြီး
အသုံးပြုမှု အကြိမ်အရေအတွက်။: 1 ၁ ကြိမ်
အကာအကွယ်ပေးထားသော အချိန်ကာလအတွင်း အကာအကွယ်ပေးထားသော စက်ပစ္စည်းကို ထိခိုက်မှု ရှိပါက Huawei ၏ အသိအမှတ်ပြု ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
ကိုင်တွယ်ထားမှုမှ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ပါဝင်ပြီး
အကာအကွယ်ပေးထားသော အချိန်ကာလအတွင်း ကိုယ်တွယ်ထားမှုမှ မတော်တဆ ထိခိုက်ပါက သင့်အနေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသော စက်ပစ္စည်း ကို အခမဲ့ ပြုပြင်းခြင်း သို့မဟုတ် လဲလှယ်ခြင်း ကို ဝန်ဆောင်မှု အခကြေးငွေ တစ်ခုဖြင့် Huawei အသိအမှတ်ပြု ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ တွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (ဟန်းဆက်အတွက်သာ အကြုံးဝင်ပြီး ဆက်စပ် ပစ္စည်း၊ အားသွင်းကြိုး၊ အပြင်ဘက်ထရီများ မပါဝင်ပါ။)
ပို့ဆောင်ပေးသာ စက်ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအတွက် တစ်ကြောင်း အခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု
အာမခံ ကာလအတွင်း မတော်တဆတိုက်မိခြင်း၊ ကျခြင်း သို့မဟုတ် ဖိမိခြင်း တို့ကြောင့် ပုံမှန်အသုံးပြုနေသော စက်ပစ္စည်း၏ ဖန်သားပြင်အစိတ်အပိုင်း ကွဲသွားလျှင် တစ်ကြိမ် အခမဲ့ ဖန်သားပြင် အစိတ်အပိုင်းကို ပြန်လည် အစားထိုးနိုင်သည်။
ပို့ဆောင်ပေးသာ စက်ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအတွက် နှစ်ကြောင်း အခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု
လေဆာထိုးခြင်း သည် သတ်မှတ်ထားသော မော်ဒယ်များတွင်သာ ရရှိသော Huawei ၏ သီးသန့် စီစဉ်သော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင့် စက်ပစ္စည်း၏ နောက်ကျောတွင် စာ သို့မဟုတ် အစုအဖွဲ့ များကို ရေးထိုးနိုင်ပါသည်။
၂။ ကျေးဇူးပြု၍ Huawei မြန်မာ အာမခံ ပေါ်လစီကို ညွန်းယူပါ။.
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ရှာဖွေမှုရလဒ် သို့မဟုတ် Huawei မြန်မာ အာမခံပေါ်လစီနှင့် ပက်သက်၍ မေးစရာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့် ပစ္စည်း၏ ဝယ်ယူထားသော သက်သေအထောက်အထားကို ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် IMEI/MEID/MAC/SN မှန်မမှန်စစ်ဆေးပေးပါ။ အီးမေးလ်ပို့ မှတ်ချက်ပေးမည်။.
ကုန်ပစ္စည်းသည် စားသုံးသူအခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအောက်မှ ထောက်ပံ့သော အာမခံဝန်ဆောင်မှု ကို ရရှိရန် အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဝယ်ယူသည့်နေရာတွင် ဆွေးနွေးစုံစမ်းပါ။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းသည် ငွေကြေးကုန်ကျသည့် ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက် hotline ကို ခေါ်ဆိုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ရှာဖွေမှုရလဒ် သို့မဟုတ် Huawei မြန်မာ အာမခံပေါ်လစီနှင့် ပက်သက်၍ မေးစရာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့် ပစ္စည်း၏ ဝယ်ယူထားသော သက်သေအထောက်အထားကို ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် IMEI/MEID/MAC/SN မှန်မမှန်စစ်ဆေးပေးပါ။ အီးမေးလ်ပို့ မှတ်ချက်ပေးမည်။ .
ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါဘာသာစကား: နံပါတ်: အချိန်: